Dowladda Soomaaliya oo ka hadashay sababaha loo xiray waddooyinka jid-dadka xiran | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Dowladda Soomaaliya oo ka hadashay sababaha loo xiray waddooyinka jid-dadka xiran
Dowladda Soomaaliya oo ka hadashay sababaha loo xiray waddooyinka jid-dadka xiran
Dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay sababaha xilligan loo xiray waddooyinka jid cadayaasha ee mara xaafadaha magaalada Muqdisho, taasoo shacabka ay walaac ka muujiyeen.
Wasiirka Amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow ayaa sheegay in sababo amni awgood loo xiray, isagoo ugu baaqay shacabka inay dulqaadaan.
Mr Ducaale ayaa sheegay in kooxaha dilalka iyo weerarada ka geysta magaalada Muqdisho ay ku dhuumaaleystaan waddooyinka jid cadayaasha, iyagoo aan adeegsan jidadka laamiga sida uu hadalka u dhigay.
“Waxaa rabaa inaan hoosta ka xariiqo in howl galadan ay bilowdeen muddo bil ka hor, guulo badan oo la taaban karo ayaa ka gaarnay, marka waxaa rabnaa inaan idin sheego howl galada aan jirno dartood waxaa la xiray jidad badan, oo xaafadaha mara, sida ogtihiin kuwa dadka dilaya laamiyada caadiga sooma maraan, waxay ku dhuumaaleystaan jid cadayaasha”ayuu yiri Wasiir Islow.
Mar uu ka hadlayay weerarkii todobaadkii hore lagu qaaday maqaayadaha Pizza House iyo Posh in kooxihii weeraray ay soo mareen jid cadayaasha.
“Dhacdadii Pizza House, kooxihii ka dambeeyay jid cadayaasha ayay ka soo baxeen, kuma imaan laamiga, marka naf la bad baadiyo wax ka fiican ma jirto, shacabka waxaa ka codsaneynaa inay noo dulqaataan, mar dhow magaalada jidadkeeda waa furi doonaa, waxaa u xirnay kaliya amni darteed waaye”ayuu yiri Wasiirka Amniga.
Labo cisho ka hor ayay aheyd markii Ciidamada Ammaanka ay xireen waddooyin jid cadayaal ah oo mara xaafado dhowr ah, iyadoo dadka ay durbaba cabasho ka keeneen, iyadoo halka kaliya furan uu yahay wadada laamiga oo ay ka jirto mashquul aad u weyn.